Izesekeli zethrendi esezivele zishanela kule sizini | Bezzia
Izesekeli zomkhuba esezivele ziyaphumelela
USusana godoy | 10/09/2021 10:00 | Izithako
Kukhona ama-plugins ayisisekelo bese izesekeli zomkhuba esizobona kusizini ngayinye. Kepha kulokhu sishiywe ekwindla nasebusika 2021-2022 ngoba sicishe safika lapho. Ngakho-ke, sekuyisikhathi sokuthola konke okuzothatha nokuningi.
Ngezinye izikhathi siyathanda ukulandela isitayela sethu kodwa akulimazi ukusihlanganisa ngeminye imininingwane yalabo abasetha izitayela. Ngoba ukuxubana okwamukelekile kuzohlala kutholakala ngokubukeka kwethu okuhle. Uma ufuna ukwazi ukuthi sikhuluma ngani, ungaphuthelwa okulandelayo.
1 Amacici we-Maxi asengumkhuba omkhulu
2 AmaSave kusuka entanyeni kuye ekhanda
3 Amabhande angena phakathi kwezesekeli zemfashini
4 Izikhwama ezinamaphethelo alukiwe
Amacici we-Maxi asengumkhuba omkhulu
Amacici angenye yezisekelo ezinhle zanoma yikuphi ukubukeka kokuzihlonipha futhi siyakwazi. Ngakho-ke, bahlala bezimisele ukusishiya ngezitayela ezahlukahlukene ngokuya ngezidingo zethu. Kulo nyaka uzoba nokucaca okucacile, ngoba akukho okuzokungaziwa nabo, kepha singazivumela ukuthi sihanjiswe ngosayizi abakhulu ngaphandle kwengozi. Ngoba amacici we-maxi azoba yizinkanyezi ezinkulu zesikhathi sekwindla nobusika. Kukhula kangcono. Vele, uma uzibuza ukuthi hlobo luni lwamamodeli esizolifaka kulolo sayizi, sikucacisa impela. Ngoba lezo eseziqedile ngama-brushstrokes ambalwa we-glitter zizobonakala kakhulu kule sizini. Ngabe usunayo imodeli engqondweni? KuZara, ngokwesibonelo, ungabathola ngemibala ehlukahlukene nobubunjwa.
AmaSave kusuka entanyeni kuye ekhanda
Kubukeka sengathi sibheka emuva futhi nalokhu ukufaka iduku ekhanda kusikhumbuza ama-60s lapho abadumile behanjiswe umphelelisi onje. Manje ungazizwa uyinkanyezi yaseHollywood ngenxa yezesekeli zemfashini. Ngoba yibo futhi abazokuphelezela ekuphumeni kwakho kosuku. Ungakhetha phakathi kwamaphethini nemibala ehlukene amafemu asiphakamisela yona, ngoba lokho sikushiyela kuwe. Kepha kulokhu asizukubona kuphela ukuthi isikhafu sifakwa kanjani njengebhande lekhanda kepha sizomboza lonke ikhanda ukubopha entanyeni.
Amabhande angena phakathi kwezesekeli zemfashini
Vele, uma singasho amabhande kuphela, akuyona into esimangazayo ngoba vele siyazi ukuthi ahlala ehamba nathi ngokubukeka okuhle kakhulu. Kepha kufanele kushiwo ukuthi kulokhu labo abanosayizi omkhulu nabo bayaqina. Yebo, kubonakala sengathi phakathi kwamagugu namabhande, ukuvelela kokubukeka kuzophela maduzane. Ngokuqeda kwe-XXL bazophatha ngokunikeza ukukhanya okwengeziwe kwisitayela sakho, ukuyigcwalisa ngezimo nemibala oyikhethayo. Ngakho-ke, ngokuqinisekile uzothola okufunayo, kepha khumbula ukuthi ungalokothi ukhohlwe ngakho. Kokubili isitayela sebhantshi namaketanga eminye yemibono emihle ekulindile.
Izikhwama ezinamaphethelo alukiwe
Kuyiqiniso ukuthi izikhwama azikwazi ukuphuthelwa ukuqokwa kwethu ekwindla nakho. Ngoba uma sikhuluma ngezesekeli ezifashisayo, awufuni nokuphuthelwa yilo mbukiso. Kepha, yize singazigqoka ngezindlela ezahlukahlukene nangemibala ehlukile, kunemininingwane eyodwa ezogqama ngaphezu kwayo yonke eminye. Kumayelana nokuqedwa kwayo futhi ngukuthi labo abanama-braids yibo abazothatha le sizini entsha. Kubukeka sengathi asifuni ukushiya ihlobo ngemuva futhi lawa ma-finishes abuye abonwa ngenkathi yehlobo. Ngakho-ke basekhona futhi banamandla kunakuqala. Futhi khetha izitayela ezibanzi nezishubile ngoba zizokuqedela ukwindla kwakho okusha kubukeka kunanini ngaphambili.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » imfashini » Izithako » Izesekeli zomkhuba esezivele ziyaphumelela